ဆိုဒ် လစ်တွားလို့— MYSTERY ZILLION
ဆိုဒ် လစ်တွားလို ့
အချိန်ကုန်လူပန်းလုပ်ထားတာလေးတွေ တွားပါပြီး..ဟင် ့
့hosting ထဲ တောင်၀င်မ၇တော ့ပါဖူးဟင့်:2::2::2::2:
Powered by phpfox ဆိုပြီးဖြစ်တွားတယ်ခင်ဗျ။
ကူညီကြပါအုံး။ ။ ခင်ဗျ။ ။ အဟင့်:77::77::77::77::77:
အဟီး.. Googling လုပ်တာတောင်တွေ့ဘူး.. ဒိုမိန်း redirect ဖစ်ဘီထင်တယ်:D:D တစ်ပတ်လောက်စောင့်ကြည့်.. မရရင် mirror ရှိရင် mirror နဲ့တက်ကြည့်:D:D .. ကိုယ့်ဟာကို ပါအကုန်မြင်ရလိမ့်မယ်..:D:D
Avira တင်ထားပြီး အဲဒီဆိုဒ်ကို ဝင်လိုက်တော့ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။ ဟက်ထိပြီထင်တယ်။
why was this site block?
ဆိုတာ နိပ်ပြီးသွားကြည် ့..ဟွန် ့...
ဟက်ခံထိတယ်လေး..ဘာလေးနဲ ့..ဟင့် :2::2::2:
နဂိုကတည်းက မှ...နာ ့ကိုမျက်စောင်းထိုးချင်နေတဲ ့ကောင်တွေ ပေါ ပါ ဘိသနဲ ့
ဆွဲ ထိုး ချင်နေတာ...အဲဒီကောင်ကို ....ဟက်ခံထိတာ...မဟုတ်လို့ဟင်း ဟင်း။ ။
နှိပ်လိုက်တော့ ဒီကိုရောက်သွားတယ်လေ။ ကျွန်တောှပြောတာ ဘာမှားသွားလို့လဲ။ :106:
မိဇူး နင်ကရင့်ကြက်သူဆိုပြီး ကလေးကို သွား ဟောက်စားလုပ်နေတယ်ပေါ့လေ.........
ငါကတော့ ကလေးပဲ ဒါပေမယ့် နင်သူများကို ဟောက်စားလုပ်တယ်..............
ပြောလို့မရရင် ကိုပရစ်ကြီးနဲ့ တိုင်ပြောမှာနော်.............:))
အဲဒီနေ့က နင်ပြောတော့ ကိုကိုဝင်းလုပ်တာဆို .............
အခု ဘယ်လိုဖြစ်ရပြန်ရတာလဲ .............
ကိုကိုဝင်း လုပ်တာဆိုရင် ကိုကိုဝင်းကို ပြန်လုပ်ခိုင်းပေါ့ဟ ................
နင်ကလဲ လုပ်လိုက်ရင် အလန့်တကြားနဲ့ ................ ဟွန်း ..................:))
အမ်.. အနော်က ကြားက ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ပါလာရတာတုန်း .. ဟုတ်ရပါဘူးဗျာ... ကျွန်တော်လုပ်တာ.. ကျွန်တော့်ပယောကကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်မှာပါ.. အနော်လုပ်ရပါဘူးနော်. လုပ်လဲ လုပ်တတ်ဘူးဟင့်.. သူ့ဆိုက်ဒ်မှာ code တွေထည့်လို့ မော်ဇီးလာက ဘန်းလိုက်တာကို.ဟင့်.. မိဇူး..နင်လုပ်တာ နင်ပြန်ရှင်းပေးနော်.. နာနင့်ဆိုက်ဒ်ကိုလုပ်ဖူးနော်..နာ့မှာ အဲလောက်အရည်အချင်းမရှိတာ နင်သိတယ်နော်..ဟင့်. စွပ်စွဲရက်ပါ့.. ဟင့်.. ခုရှင်းပေးခုရှင်းပေး.. :14: :14::14:
are u crazy n00b?
အဲဒီနေ့က ငဇူးပြောတော့ ကိုကိုဝင်းလုပ်တာတဲ့.............
အဲဒီနေ့ က သူတော်တော်ထိသွားပုံရတယ်ဗျ.................
ကိုကိုဝင်း လုပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လဲ ထားလိုက်ပါတော့ဗျာ...................
လုပ်ထားတာဆိုရင်လဲ ပြန်လုပ်ပေးလိုက်ပါဗျာ ငဇူးတစ်ယောက် အရူးမီးဝိုင်း ဖြစ်နေတာဗျ............
[html]http://en-us.www.mozilla.com/en-us/firefox/phishing-protection/[/html]နှိပ်လိုက်တော့ ဒီကိုရောက်သွားတယ်လေ။ ကျွန်တောှပြောတာ ဘာမှားသွားလို့လဲ။ :106:
တေနာ..တွေ ..မဖွနဲ ့နော်..
နာက ဘယ်တူများ ၀င်ပြီး နည်းလမ်းပေးမလဲ လို ့စဉ်းစားမိပါတယ်
နင့်တို ့က ၀င်ပြီးဖွနေတယ်။ ။
တော်တော့:14: :14: :14: